5 amin'ireo fanentanana dokambarotra tsara indrindra | Famoronana an-tserasera
Ny fampiala voly sy mampientanentana ny mpanjifa no tian'ny ankamaroan'ny fampielezan-kevitry ny dokam-barotra ho tratrarina, satria raha mahavita izany izy ireo dia ho lehibe kokoa ny vintana hahombiazan'ny fanentanana iray. SAINGY ny tena zava-dehibe dia mijanona ho fahatsiarovana ny mpanjifa ny fanentanana, satria hampahafantatra antsika izany fa nisy fiantraikany tsara taminy izany.
Noho izany antony izany, ato amin'ity lahatsoratra ity no angonintsika 5 amin'ireo fanentanana dokambarotra tsara indrindra izay azo antoka fa ho tsaroanao hatry ny ela.
1 5 amin'ireo fanentanana dokambarotra tsara indrindra
1.1 Dove: tena hatsaran-tarehy
1.2 Volkswagen: "Mieritrereta kely"
1.3 Fiarandalamby Melbourne: Fomba adala ho faty
1.4 Heineken: "Mirary soa ho an'ny rehetra"
Alohan'ny hampisehoana anao ireo ohatra nofanteninay dia azontsika lazaina fa nifototra tamin'ny fiantraikan'ireo fanentanana ireo io fifantenana io, satria ny sasany amin'izy ireo nomena ho tsara indrindra teo amin'ny tantara izy ireo, ny hafa dia nandrava ny stereotypes sy ny fenitra ara-tsosialy ary ny hafa namaky ny firaketana an'izao tontolo izao.
Eto isika dia hijery ny 5 amin'ireo tsara indrindra. fampielezan-kevitra amin'ny dokambarotra noforonina hatramin’izao.
Dove: tena hatsaran-tarehy
Ny stereotype dia fanorenana ara-tsosialy, izany hoe, noforonin'ny fiaraha-monina, ka amin'ny fomba mitovy amin'ny famoronana azy dia azo esorina izy ireo, na dia mitaky ezaka bebe kokoa aza. Noho izy ireo dia mipoitra ny tondra-drano izay mikatsaka ny hiala amin'ny stereotype efa niorina ary hampiaiky volana ny vahoaka, matetika amin'ny fampiasana tohan-kevitra mampihetsi-po. Ny tena zava-dehibe amin'ity karazana riandrano ity dia ny fomba fitsaboana hafa ataon'izy ireo amin'ny vehivavy. Miova ny hevitra momba ny hatsaran-tarehy nentim-paharazana sy idealy ary mandika lalàna. Amin'ireny tranga ireny, ny vehivavy no manana feo sy mifidy amin'ny fanapahan-keviny manokana, mampiseho ny tenany ho "tsy lavorary" sy tsy mifona.. Miala amin'ny fampifandraisana ny fahombiazan'ny vehivavy amin'ny bika aman'endriny izy ireo, noho izany dia manolotra modely amin'ny vehivavy mahomby sy mahaleotena izy ireo.
Ireo fanambarana ireo dia maneho ohatra mazava momba ny fivoarana amin'ny fikatsahana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy. Dove dia iray amin'ireo marika mpisava lalana amin'ny fampiasana an'io loharano io, mpiaro mahatoky ny fahasamihafana, mampiseho vehivavy tena izy sy matanjaka izy ireo. Hatramin'ny nanombohan'izy ireo ny marika tamin'ny 1957, dia niara-niasa tamin'ny vehivavy isan-karazany izy ireo, mba hitantara ny tantarany sy hivarotra ny vokatra ary ny fomba ahitantsika ny tena hatsarana. Ohatra iray tamin'izany ny tamin'ny taona 2004 nanombohan'izy ireo ny fanentanana Real Beauty. Fihetseham-po revolisionera tao amin'ny indostria tamin'izany fotoana izany, nanasongadina ireo vehivavy nanapotika ny stereotype momba ny hatsaran-tarehy izy ireo. Ny fikasany dia ny hampitombo ny fahatokisan-tenan'ny vehivavy amin'ny fampisehoana sary tsy navoaka miaraka amin'ny fahatokisana ny tenany sy ny hatsarany voajanahary.
Volkswagen: "Mieritrereta kely"
Dimy ambin’ny folo taona taorian’ny Ady Lehibe II, dia lasa firenena mpanjifa i Etazonia, iray amin’ireo firenena matanjaka indrindra maneran-tany. Noho izany dia nanomboka nanamboatra fiara ho an'ny fianakaviana manana baby boomers izy ireo. Ity fanentanana ity dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny marika fiara Volkswagen. Ny lahatsoratra fanentanana dia noforonin'i Julian Koening avy amin'ny masoivoho Doyle Dane Bernbach tamin'ny 1959. Ity fanentanana ity dia nanasa anay hihevitra ny fiara ho fitaovam-pitaterana fa tsy ho toy ny sata. CMiaraka amin'ny tanjona hampiroborobo ny maodely Volkswagen Beetle vaovao, fiara kely. Ny lakolosy Fahombiazana tokoa izany ka nanampy tamin'ny fahombiazana ara-barotra ny Beetle.
Tamin'izany fotoana izany, ny dokam-barotra momba ny fiara dia nifantoka kokoa tamin'ny fanomezana fampahalalana betsaka araka izay azo atao momba ny vokatra fa tsy ny fandresen-dahatra ny mpanjifa hividy izany. Fanampin'izany, nanana fomba fijery mifantoka kokoa amin'ny fantasy izy ireo noho ny zava-misy.
Fiarandalamby Melbourne: Fomba adala ho faty
Nadika tamin'ny teny anglisy hoe "Dumb ways to Die", dia fanentanana dokam-barotra noforonin'ny masoivoho McCann Melbourne. Izy io dia novolavolaina ho an'ny Metro Trains, tambajotra fitaterana an-dalamby any Melbourne (Australia). Ny tanjon'ity hetsika ity dia ny hampiroborobo ny fiarovana ny olona izay manatona ny lalamby. Lasa fahombiazana maneran-tany ity fanentanana ity, noho ny lahatsarin-kirany. Manana mpijery 228 tapitrisa ao amin'ny Youtube izy amin'izao fotoana izao. Nasehon'ireo tarehin-tsoratra mihetsiketsika ao amin'ilay horonan-tsary ireo fomba adala ho faty toy ny fihazonana bibilava biby fiompy, mijoro eo amin'ny sisin'ny lampihazo fiaran-dalamby, na manitsaka ny lalamby mba hiova sehatra fa tsy mampiasa tohatra.
Nifantoka tamin'ny gazety, radio, dokambarotra an-kalamanjana, ary tambajotra sosialy ity fanentanana ity. Miaraka aminy te-hisarika ny sain'ny besinimaro izy ireo fa hatramin'izay dia tsy liana tamin'ny fanentanana momba ny fiarovana ny lalana.
Heineken: "Mirary soa ho an'ny rehetra"
Ity fanentanana ity dia notarihin'ny Megaforce ary novokarin'ny Iconoclast Paris. Miaraka amin'ity toerana ara-barotra ity, Heineken, dia naniry ny hamela ny fitsarana an-tendrony momba ny safidy ny vokatra, satria tsy manavaka sy miaro ny mpanjifa tsirairay izy ireo. Amin'izany dia tian'izy ireo ny hampita fa ny fihinanana ny labiera malazany dia tsy manavaka ny lahy sy ny vavy na ny stereotypes.
Ao amin'ny horonan-tsary dia afaka mahita toe-javatra samihafa ianao, izay ahafahan'ny mpandroso sakafo manompo vehivavy amin'ny fomba tsy mety, satria izy ireo no nanafatra labiera. Heineken dia te-handrava ireo stereotype ireo. Tahaka ny vehivavy afaka misotro labiera, ny lehilahy dia afaka misotro cocktail. Heineken fanoloran-tena amin'ny fahalalahan'ny safidin'ny tsirairay, ary tsy noho ny sarin'ny fiaraha-monina izay tokony horaisin'izy ireo araka ny maha-lahy na maha-vavy azy.
Loharano: Red Bull
Red Bull Stratos es una tobyan / A -bahoakaitaria LanzAda en el 2010 ny la empResa de bedia asaoas ANGOVOéTICas Red Bull. Nikatsaka ny hampiroborobo ny fitsambikinana stratosferika an'i Felix Baumgartner ny fanentanana, quok el 14 de Octubre de 2012 se niova foirtió en el voalohany to be olombelonao en tenaizar un raftny dede una ny zava-drehetraUra de 39 TANIMANGAónihaonaRosa. La tobyan / A fue un éxIto en tErahyos de -bahoakaidad, ya de BaumgardNera se niova foirtió en una mankalazaidad mundarial y el raftny fue Cubiratsy ny ny mediOS de frunicfiolahanaON de nydo el mundaro.
Ny lakolosy mikendry ny hampiseho fa ny vokatra Red Bull dia manatsara ny fahaiza-manao ara-batana sy ara-tsaina. Ity fanentanana ity dia nahavita ho lasa iray amin'ireo fanentanana ara-barotra sy dokam-barotra tsara indrindra teo amin'ny tantara, ary koa namorona iray amin'ireo hetsika ara-panatanjahantena lehibe indrindra tamin'ny taona 2012.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » 5 amin'ireo fanentanana dokambarotra tsara indrindra
Ampifandraiso amin'ny Photoshop ny sary iray amin'ny iray hafa